Iindaba - Irhasi yendalo inyuka iye kwinqanaba eliphezulu ukusukela ngo-2008 njengoko imfazwe yaseRussia inyusa iimarike zamandla
Amaxabiso erhasi yendalo yase-US anyukele kwinqanaba eliphezulu ngaphezulu kweminyaka eli-13 ngoMvulo phakathi koxinzelelo lwamandla ehlabathi ngenxa yemfazwe yaseRussia e-Ukraine kunye noqikelelo olubiza amaqondo obushushu asentwasahlobo apholileyo.
I-futures inyuke nge-10% ukuya phezulu kwi-8.05 yezigidi zeeyunithi ze-thermal zaseBritani, elona nqanaba liphezulu ukususela ngoSeptemba 2008.Iinzuzo zakha kumandla akutsha nje, kunye negesi yendalo ekhuphuka kwiiveki ezintlanu ezithe ngqo.
"Impembelelo yongquzulwano phakathi kwe-Ukraine kunye neRashiya kwimarike yegesi yaseNyakatho yaseMelika inokuthi ibe yithuba elide," kusho uDavid Givens, umlawuli we-North American gas kunye neenkonzo zamandla kwi-Argus Media.
Amaxabiso erhasi yendalo yase-US ngoku anyuke nge-108% kulo nyaka, eyongeza kwiinkxalabo zokunyuka kwamaxabiso kulo lonke uqoqosho.Inyathelo lincinci kakhulu kuneYurophu, apho ikamva lerhasi liye lanyuka laya kumanqanaba okurekhoda njengoko i-EU ingxamele ukuzikhulula amandla aseRussia.
I-US ngoku ithumela imiqulu yerekhodi ye-LNG eYurophu, inyusa amaxabiso e-Henry Harbor.
“Ukuthunyelwa kwe-LNG kumazwe angaphandle kubaluleke ngakumbi njengoko imfuno evela kwi-geopolitical kunye nokuveliswa kwamandla/usetyenziso lwemizimveliso yomelele.Indima yase-US njengomthengisi iyaqhubeka nokukhula, ”i-RBC yaphawula.
Abavelisi baye bagcina imveliso phakathi kwamaxabiso anyukayo, kwaye uluhlu lwempahla ngoku luyi-17% ngaphantsi komyinge wabo weminyaka emihlanu, ngokutsho kukaCampbell Faulkner, usekela-mongameli ophezulu kunye nomhlalutyi wedatha oyintloko kwi-OTC Global Holdings.
“Ngeli xesha kulo nyaka uphelileyo, i-US yaqala ukujongeka njengeYurophu, isophula ixesha lonyaka lakutshanje kwaye itshintshe ijika ibe yimeko yemfuno eqhubekayo,” utshilo.
UFaulkner wongeze wathi: "Imfazwe phakathi kwe-Asiya neYurophu kwimpahla ye-LNG esecaleni ikwabeka uxinzelelo olongezelelekileyo kwirhasi, eya kuthi iphambukiswe kuNxweme oluseNtshona lwaseMelika kunye neNew England kubusika obuzayo."
Sekunjalo, akuyena wonke umntu oqinisekileyo ukuba i-rally iya kuhlala.I-Citi iphakamise i-2022 ye-base-case ye-Henry Hub yexabiso elijoliswe kuyo ngamasenti angama-40 ukuya kwi-4.60 yezigidi zeeyunithi ze-thermal zaseBrithani, ngaphantsi apho ikhontrakthi ithengisa ngoku.
"[A] indibaniselwano yezinto ezinokonyusa imfuno kunye nokucotha kokukhula kwemveliso, kodwa njengoko amaxabiso enyuka, imarike inokuqikelela impembelelo yayo," yatsho inkampani.
Izabelo zabavelisi begesi yendalo i-EQT Corp., i-Range Resources kunye ne-Coterra Energy yabetha i-52-iveki eziphakamileyo kwi-tradeng yangoMvulo.Uluhlu kunye ne-Coterra yenyuka ngaphezu kwe-4%, ngelixa i-EQT yenyuka phantse i-7%.
Idatha yi-snapshot ephilayo *Idatha ilibazisekile ngemizuzu eyi-15 ubuncinci.Iindaba zeshishini lehlabathi kunye nezezimali, ii-stock quotes, kunye nedatha yemarike kunye nohlalutyo.